डबल शाफ्ट मोटर नवीनतम मूल्य डबल शाफ्ट मोटर निर्माताहरू
बिक्रीको लागि २t० भोल्टको इलेक्ट्रिक मोटर्स
औद्योगिक डबल शाफ्ट मोटरको निर्माता, क्रेन ड्यूटी मोटर, पम्पहरूको लागि, डबल शाफ्ट मोटर र एकल चरण इलेक्ट्रिक मोटर्स सोगरहरूद्वारा प्रस्ताव गरिएको।
चीन डबल शाफ्ट मोटर निर्माता
के तपाईं डबल शाफ्ट मोटर किन्न तयार हुनुहुन्छ? तीन चरण डुअल शाफ्ट मोटर विकल्पहरूको विस्तृत विविधता तपाईलाई उपलब्ध छ
यहाँ तपाईंको सन्दर्भ को लागी केहि तस्वीरहरु छन्।
डबल शाफ्ट मोटर एसी इलेक्ट्रिक
गियर बक्सको साथ डुअल शाफ्ट एसी मोटर जसले कम भोल्टेजमा राम्रो टोक़ र आरपीएम दिन्छ डबल एन्ड शाफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर 380०V उच्च टोक़ १०० केजी डीसी मोटर डीसी वर्ग गियर मोटर।
डबल शाफ्ट फ्यान / ब्लोअर मोटर
शाफ्टमा जोडिएको गियर बक्सको साथ एउटा डीसी मोटर, जुन यांत्रिक रूपमा प्रत्यक्ष विद्युत (डीसी) बाट संचालित इलेक्ट्रिक मोटर हो। १ 150० आरपीएम प्लास्टिक गियरको साथ मोटो। AC इलेक्ट्रिक डुअल मोटर जुन समुद्री, मोटर वाहन, ग्राउन्ड समर्थन उपकरण, खननको लागि डिजाइन गरिएको हो।
युनिभर्सल डबल शाफ्ट मोटर
यस संस्करणमा १२ व्ही ब्रश गरिएको डीसी मोटर रहेको छ र long१.२12: १ धातुको साथ लामो आयु कार्बन ब्रशेसको साथ छ। हामीसँग भण्डार गरिएको छ र बारड, मार्भेयर र अन्य ब्रान्डहरूका लागि सबै डबल शाफ्ट ब्लोअर मोटर्समा पहुँच छ।
यहाँ धेरै डबल शाफ्ट मोटरहरू छन् जुन तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ
यहाँ धेरै कम मूल्य, उच्च गुणवत्ता डबल शाफ्ट डीसी मोटर्स विश्वव्यापी रूपमा छन्। यदि तपाईं सस्तो १ r० आरपीएम डुअल शाफ्ट मोटर किन्न चाहनुहुन्छ भने, यहाँबाट १ r० आरपीएम डुअल शाफ्ट मोटर छनौट गर्नुहोस्। "डबल शाफ्ट मोटर" सँग "दुई शाफ्ट" हुन्छ जुन मोटर केसबाट बाहिर निस्कन्छ। खाली-शाफ्ट मोटर्स १ PM150/150PM1 - उद्योग समर्थन।
यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने तपाईंले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, हामी तपाईंलाई मद्दत गर्न खुशी छौं! हाम्रो ग्राहक सेवा सबै दिन अनलाइन छ। वर्षको मोटर निर्माण अनुभव केवल तपाईंलाई उच्च गुणवत्ता र टिकाऊ मोटर प्रदान गर्नका लागि हो। यहाँ डबल शाफ्ट मोटर, डुअल शाफ्ट मोटर्स निर्माणकर्ताहरू फेला पार्नुहोस्।
केवल औद्योगिक मेट्रिक्समा पूर्ण टेक्निकल स्पेसिफिकेसनका साथ सबै सीमेन्स मोटर्स खोज्नुहोस् र तुलना गर्नुहोस्। हामीसँग सबै सीमेन्स इलेक्ट्रिक मोटर्स सूची छन्, सामान्य विशिष्टता हार्सपावर: २० एचपी भोल्टेज: 20१० वोल्ट चरण: RP आरपीएम: १410 आरपीएम फ्रेम: २१3TZ।
यदि यी उत्पादनहरू मध्ये कुनै तपाईंको हो भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्! हामी तयार छौं र हाम्रो सहयोगको लागि तत्पर छौं। हामी लाभको रूपमा गुणवत्ता र ईमानदारीको रूपमा सबैभन्दा कम मूल्य लिन्छौं।